Galaxy Z tụgharịa natara mmelite nche June | Gam akporosis
The Galaxy Z Flip bụ smartphone nke ahịa chọrọ iji gosi na ọ tozuru oke nakweere foldable smartphone ọzọ, ọ bụ ezie n'adịghị ka ndị gara aga, na a mpịachi ihuenyo n'ime na-enweghị mkpọchi n'ime.
Ma Motorla RAZR na Galaxy Z Flip bịarutere n'ahịa ahụ n'otu oge ahụ, ọ bụ ezie na ụdị Motorola ejirila nke ahụ ezigbo ihuenyo mma, ụdịdị dị ala na ọnụahịa dị elu. Atụmatụ Motorola dabere na agụụ Ọ mịghị mkpụrụ, ihe na Z tụgharịa nke nwetara na ọhụrụ.
Koreanlọ ọrụ Korea na ntinye aka ya iji melite ụdị ya kachasị elu kwa ọnwa, ka malitere mmelite nche maka onwa nke June 2020, mmelite nke na-ebu nọmba nọmba700FTBS1ATE3 na nke dị ugbu a site na OTA n'ụwa niile.
Ndozi nchedo maka Galaxy Z Flip bụ 203,94 MB na anaghị agbakwunye ọrụ ọ bụla gafere imezi nche chinchi nke achọpụtara na gam akporo 10 na otu UI 2.1 nhazi nhazi ebe obu na nwelite ikpeazụ.
Maka August nke otu afọ ahụ, Samsung ga-amalite ọgbọ nke abụọ nke Galaxy Fold, ihe nlereanya nke oge a ga-agbakwunye usoro ihuenyo yiri nke Z Flip, na-atụgharị ihuenyo kpamkpam n'egosighi ụdị curvature dị ka ọgbọ mbụ.
Ọ bụrụ na ị na-anụ ụtọ ọnụ a ma achọghị ichere ịnata ọkwa na ọ dịla, ịnwere ike ịnwale iji aka nyochaa ma ọ dịla site na Ntọala> Mmelite ngwanrọ. Iji wụnye mmelite a, ọ dị mkpa na ngwaọrụ ahụ na-akwụ ụgwọ ma ọ bụ dị elu karịa 50% ọkwa batrị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Galaxy Z Flip natara mmelite nche June